Acer wuxuu dib u cusbooneysiinayaa buugaagta xusuus-qorka cayaaraha GeForce RT 900 oo qalabaysan Predator Triton 2080 | War gadget
Acer wuxuu dib u soo cusbooneysiiyaa buugaagta xusuus-qorka ee loo yaqaan 'GeForce RT 900-qalabaysan Predator Triton 2080
Qolka Ignatius | | Laptops
Sanadihii la soo dhaafay, shirkado dhowr ah ayaa bilaabay inay soo saaraan laptops-ka ciyaaraha ee na raadinaya noo soo bandhig waxqabadka ugu badan ee qalab aan geyn karno meel kasta. Inta u dhexeysa buugaagta xusuus-qorka ah, beddeliyeyaasha ayaa maareynaya inay ku kasbadaan qayb muhiim ah qaybtan waxaana caddeynta tan laga heli karaa Acer Predator Triton 900 cusub.
Shirkadda Acer waxay soo bandhigtay laba kombuyuutar oo kombuyuutarro ah oo cusub oo ay maamusho Windows 10 oo loogu talagalay inay bixiso ugu badnaan ee kuwa ugu caansan ciyaarta fiidiyowga ah. Waxaan ka hadleynaa Predator Triton 900 oo leh shaashad 17-inch ah iyo shaashad 4k oo la beddeli karo iyo Predator Triton 500, oo leh shaashad 15-inji ah, dhammaystiran macdan iyo dhumucdiisuna tahay 17,9 mm.
In kasta oo shaashadda la beddeli karo ee Predator Triton 900 ay noo oggolaaneyso in aan dhigno aaladda habka ugu raaxada badan ee aan ugu raaxeysan karno cayaaraha aan ugu jecel nahay, haddana Triton 500 wuxuu na siinayaa qalab is haysta oo leh jiif bir ah oo ku habboon kuwa Waxay u baahan yihiin inay qalabkooda ka soo qaadaan halkan ilaa halkaas.
Sida uu sheegay Maamulaha GeForce OEM ee NVIDIA:
Waxaan ku faraxsanahay in Max-Q-ga loo yaqaan 'GeForce RTX 2080 GPU' uu gacan ka geysanayo dib-u-qeexidda khibradaha ciyaaraha laptop-ka. Iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad casri ah oo ay ka mid yihiin baafinta raajada waqtiga-dhabta ah iyo xusuusta jiilka soo socda ee GDDR6, cayaartooydu waxay si kalsooni leh u dooran karaan Predator Triton 900 oo ah madal ciyaareed adag oo muuqaal leh.
3 Xakamee taleefanka casriga ah
4 Qiimaha iyo helitaanka Acer Predator Triton cusub
Acer Predator Triton 900 wuxuu ku dhexjiraa birta mashiinka wareegaya, kordhinaya oo noo ogolaanaya inaan hoos u laabo shaashadda 17-inji ah. Qalabkani wuxuu na siinayaa afar nooc oo adeegsi ah oo aan kula wadaagi karno shaashadda asxaabteena inta aan ciyaareyno, la ciyaarno shaashadda taabashada, u adeegsanno sida laptop-ka dhaqameed ama beddelka loo adeegsan karo cunsur naqshadeeye.
Trackpad wuxuu ag fadhiyaa kiiboodhka kaas oo kuu ogolaanaya inaad gacmahaaga u dhigto meel dabiici ah si aad ugu ciyaarto qaab raaxo leh oo leh dhumuc dhan 23,75 milimitir. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay aaladda codka ee loo yaqaan 'Waves Maxx audio' oo bixisa tayada codka oo aad u liidata iyo waayo-aragnimo maqal ah oo 3D-heer sare ah
Gudaha, waxaan helnay NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU Waad ku mahadsantahay shaashadeeda 4k IPS, waxay na siineysaa khibrada ugu wanaagsan ee ciyaarta fasalkeeda iyadoo lala socdo jiilka 7-aad ee processor Intel Core i32 oo ay wehliyaan ilaa XNUMX GB xasuusta iyo keydinta, SSD RAID AMA PCIe NVMe.
Habka Predator Triton 500 wuxuu na siiyaa a 15,6-inji IPS shaashad ah, 300 nits oo dhalaal ah iyo heerka cusbooneysiinta ee 144 Hz oo leh jawaab ah 3 ms, oo culeyskiisu yahay 2.1 kg iyo 17.9 mm oo dhumuc leh, oo leh jiif bir ah iyo kaliya 6,3 mm bezels, oo na siiya shaashad leh mid dabooleysa 81% dusha sare. Marka laga hadlayo madax-bannaanida, qaabkani wuxuu gaarayaa 8 saacadood oo is-maamul ah.
Moodelkan waxaa lagu heli karaa naqshadeynta NVIDIA GeForce RTX 2080 oo leh naqshadeynta Max-Q, jiilka siddeedaad Intel Core i7 processor, illaa 32 GB oo ah DDR4 RAM iyo NVMe PCIe RAID 0. Intaa waxaa dheer, sawirada ayaa noo oggolaanaya inaan iska dhaafno marka lagu daro nidaamyada taageeraya xaqiiqda dhabta ah, u rogida aaladdan dhul-dhan oo aan awoodno ku raaxeyso cayaaraha aan ugu jecelnahay meel kasta.
Xakamee taleefanka casriga ah
Thanks to barnaamijka PredatorSense, waan awoodnaa xakamee qalabka ugaadhsade ka casriga ah si wax looga beddelo dejinta xad dhaafka ah, xawaaraha taageereyaasha, laydhka, iyo qaababka maqalka. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale u hawlgelin karnaa noocyo kala duwan oo hore loo sii deyey kombiyuutarka ama waxaan ku beddeli karnaa meel fog.
Qiimaha iyo helitaanka Acer Predator Triton cusub
Acer Predator Triton 900 wuxuu imaan doonaa Spain bisha Maarso ee sanadkan laga bilaabo 4.199 euro, halka Predator Triton la heli doono laga bilaabo Febraayo wuxuuna ka bilaaban doonaa 1.999 euro. Waqtigan la joogo, qeexitaannada nooc kasta oo moodellada ah lama heli karo, sidaa darteed waa inaan sugnaa ilaa Febraayo iyo Maarso siday u kala horreeyaan si ay u gaaraan suuqa si ay u hubiyaan waxa qaabeynta la heli karo ay yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Laptops » Acer wuxuu dib u soo cusbooneysiiyaa buugaagta xusuus-qorka ee loo yaqaan 'GeForce RT 900-qalabaysan Predator Triton 2080
Koogeek: Alaabadaada Caafimaad ee Ugu Fiican ee Ku Iibso Amazon